एमसीसीबारे नेपालमा चौतर्फी बिरोध भएपछि उपाध्यक्ष फतिमाले के भनिन ? — Sanchar Kendra
एमसीसीबारे नेपालमा चौतर्फी बिरोध भएपछि उपाध्यक्ष फतिमाले के भनिन ?
काठमाडौँ । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीबिरुद्ध चौतर्फी बिरोध भएपपछि उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले एमसीसीबारे नेपालमा भएको विवादबारे चित्त दुखाएकी छन् । विहीबार (आज) बिहान मात्रै काठमाडौँ आइपुगेको फतिमा नेतृत्वको टोलीले सबैभन्दा पहिले विपक्षी दलका नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेको थियो ।
ओलीसँगको वार्ताका क्रममा फतिमाले विवादबारे चित्त दुखाएकी हुन् । ‘एमसीसीलाई लिएर अहिले नेपालमा जे भइरहेको छ,’ फतिमाको भनाइलाई उद्धृत गर्दै एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले भने, ‘यो नहुनुपर्थ्यो ।’
७. एमसीसी हिन्द प्रशान्त रणनीति (आईपीएस) को मातहत रहेको भन्ने कुरा सम्झौतामा कतै लेखिएको छैन । के एमसीसी आइपीएसको मातहत छ त ? यो विषय एमसीसीसँगको सम्झौतामा लेखिएको छैन ।
८. के नेपाल आइपीएसको सदस्य वा त्यसमा सदस्य भएको छ वा सदस्य हुन मिल्छ ? नेपालको संविधान, कानून तथा नेपालको परराष्ट्र नीतिले आईपीएसको जे उद्देश्य रहेको छ, त्यसअनुसार त्यसमा सहभागी हुन मिल्दैन । हाम्री अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय पञ्चशील सिद्धान्तका आधारमा असंलग्न परराष्ट्र नीति भएकाले कुनै पनि गुट, गवबन्धन (सैनिक वा गैरसैनिक) मा सामेल हुन मिल्दैन ।
त्यसैगरि संयुक्त सैनिक अभ्यासबारे पटकपटक अमेरिकी सैनिक अधिकारी र नेपाली सेवाका अधिकारीहरूसँग छलफल भएको व्यहोरा उक्त रिपोर्टको पृष्ठ ३६ मा उल्लेख छ । त्यसैले यो केहो ?